Majorca inoda kuti vashanyi vekuEurope vadzoke
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Majorca inoda kuti vashanyi vekuEurope vadzoke
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mallorca ndiyo Spain inonyanya kukosha nzvimbo dzekufamba kune vashanyi vazhinji vekuEurope. Iyo nharaunda inoramba yakangwarira uye inotsanangurira kune vateereri vari kuenda kune chaicho ITB bhizinesi show.
Hurumende yeMajorca nezvitsuwa zvakavakidzana nazvo inoramba ichingwarira kusvika padenda iri uye iri kusimudzira tariro yekuti kufamba kuchadzoka nekukurumidza. "Tinogona kuona dambudziko richipera", akadaro Francina Armengol, Gurukota-Mutungamiriri weBalearics, achitaura kubva pachikuva chengarava chePalma. Izvo zvinogara zvakadzikira hutachiona huwandu pazvitsuwa zveMajorca, Menorca, Ibiza, uye Formentera zvakapa chikonzero chetariro.
Gurukota rezvekushanyirwa, Iago Neugueruela akati: “Tinoda makoridho ekufambisa akachengeteka evashanyi vedu vanobva kuGerman - tichiona kuchengetedzeka kukuru kwevafambi nevanhu vemuno. "Muna 2020 maBalearic Islands akange aratidza kuti vaikwanisa kukunda dambudziko", akadaro Neugueruela. “Tine mamiriro akachengetedzeka uye nehutano hwakanaka muMediterranean. "Tine chivimbo chekuti bhizinesi rekufamba richadzoka."
Pamusoro pekuyedza kwekuyedza uye pfungwa dzekuongorora, vashanyi veBalearics vaitarisira kufambira mberi kunoitwa kubaya vanhu nevashanyi, Francina Armengol akawedzera kuti, indasitiri yezvekushanya. "Zvitsuwa zveBalearic zvaizozvipira senzvimbo yekuyedza yekudzivirira kwekuSpain. Nekudaro, zvaive zvakakosha kuronga maratidziro nedzimwe nyika. "Hakuchina kufamba kunze kwekuchengeteka kwehutano," akadaro gurukota rezvekushanya. Kugara uchigadzirisa kunogona kuwanikwa pawebhusaiti pa www.makemuru.travel/de/baleares.
Neugueruela akasimbisa kuti denda iri raidawo kuongororazve zano rezvehupfumi reBalearic Islands, iro raive rakabatana nekushanya. Pfungwa dzezvemagariro, dzemari, uye dzekushanyirana dzakazvimirira dzezvakatipoteredza dzaive dzakakosha kupfuura nakare kose kuti pagadzikane mukana pakati pebhizimusi nekushanya, chengetedzo, zvivakwa zvehutano, uye nekuvandudza mabasa.